Waa Maxay Arinta Qariibka Ah Ee Aan Madaxda Kooxda Real Madrid Looga Baran Ee Ay Pual Pogba Ka Dalbadeen? - Gool24.Net
Waa Maxay Arinta Qariibka Ah Ee Aan Madaxda Kooxda Real Madrid Looga Baran Ee Ay Pual Pogba Ka Dalbadeen?
July 8, 2019 Mahamoud Batalaale
Kooxda Real Madrid ayaa si wayn u doonaysa saxiixa xidiga khadka dhexe ee xulka qaranka France iyo kooxda Manchester United ee Pual Pogba iyada oo Zinedine Zidane uu bartilmaameedka kowaad ka dhiganayo xidigan koobka aduunka ku soo guulaystay.
Pual Pogba iyo wakiilkiisa Mino Raiola ayuu midba markiisa saxaafada ka sheegay hamigooda xagaagan iyo sida ay u doonayaan in ay ka shaqeeyaan in Pogba uu ka baxo Manchester United.
Laakiin waxaa la ogaaday arin qariib ah oo aan looga baran maamulka sare ee kooxda Real Madrid oo ay ka dalbadeen in uu Pual Pogba sameeyo taas oo muujinaysa taxadarka ay ka muujinayaan qaabkii ay xidiga reer France kula soo wareegi lahaayeen.
Wargayska AS ee magaalada Madrid ka soo baxa ayaa shaaciyay in maamulka Real Madrid ay ahaayeen kuwii Pual Pogba ka dalbaday in aanu seegin safarkii ciyaartoyda kooxdiisa Manchester United ee Australia waxaana sharaxaad laga biyay sababta ay Madrid go’aankan u gaadhay.
Iyada oo hore looga bartay in Real Madrid ay khilaaf wayn ka dhex abuurto ciyaartoyda wada xaajoodkooda lagu adkeeyo ama laga diido in laga iibiyo isla markaana ay kula talin jireen in ay shaqo joojin sameeyaan ama ay saxaafada warkooda ka cadeeyaan sheekadu markan way ka duwan tahay.
Maamulka Real Madrid oo maanka ku haya khilaafkii xoganaa ee Manchester United suuqa kala iibsiga ku soo dhex maray sanadkii 2015 kii ee arintii David De Gea iyo waliba in ay aaminsan yihiin in haddii uu Pogba seegi lahaa safarkii kooxdiisa in wada xaajoodka lagu sii adkayn lahaa, waxay Pogba u sheegeen in uu ciyaartoyda kooxdiisa la safro.
Waxa kale oo xogtan lagu sheegay in maamulka Real Madrid ay ogyihiin xiisaha ay kooxda Juventus wali u hayso Pual Pobga taas oo ay ka cabsadeen in haddii Pogba uu tababarka seegi lahaa ay ka cadhaysan karto maamulka United oo xataa haddii ay ogolaadaan bixitaanka Pogba muhiimada siin kara Juventus.
Waxayna Florentino Perez iyo maamulka kooxdiisa Real Madrid qaateen go’aan ah in Pual Pogba uu sii wato tababarka kooxdiisa isla markaana ay qaab nabadgalyo ah iskugu dayaan in ay Manchester United ula xaajoodaan.
Inkasta oo ay maamulka Real Madrid ahaayeen kuwa sababta buuxda u ahaa in Pual Pogba iyo wakiilkiisa Mino Raiola ay saxaafada ka sheegeen sida ay bixitaan u doonayaan, haddana ma doonayaan in ay dagaal toos a la galaan Ed Woodward iyo maamulka kooxdiisa Old Trafford.
Pual Pogba ayaan amarka kooxdiisa Manchester United ku iman xarunta tababarka isla markaana aan safarka Australia u aadin in uu badalay go’aankiisii hore, balse waxa uu qaatay talada uu Madrid ka helay ee ah in aanu falaago noqon si ayna xaaladu uga sii xumaan.
Real Madrid ayaa Manchester United u haysa doorashooyin kala duwan oo ah dalabyo iskugu jira lacag iyo ciyaartoy ay qayb ka yihiin Bale iyo Isco, laakiin Man United ayaa Pogba ku qiimaynaysa 150 milyan halka ay inta badan ku adkaysanayaan in aanu iib ahayn.
Si kastaba ha ahaatee, maamulka Madrid ayaan hore looga baran in ay ciyaartoyda loo diidan yahay in ay la wareegaan kula taliyaan in ay tababarka kooxdooda sii wataan balse markan waxay qaadeen tabaalo ay kaga baaqsanayaan in ayna dagaal hor leh la galin maamulka Man United.